ကွယ်လွန်သူ Winnie Mandela တောင်အာဖရိက ဂုဏ်ပြု
A man holds upaframe showing newspaper clippings of anti-apartheid activist Winnie Madikizela-Mandela during her memorial service at Orlando, Stadium, in Soweto, Apr. 11, 2018.
တောင်အာဖရိက ရဲ့ မိခင်ကြီးလို့ တင်စားခဲ့ကြတဲ့ အသက် ၈၁ နှစ်အရွယ်ရှိ Winnie Mandela ဧပြီ ၂ ရက်နေ့ က ကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာ အသားအရောင်ခွဲခြားမှုပပျောက်ပြီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရဖို့ ကာလရှည် ကြိုးပမ်းခဲ့ ရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို ပြန်လည် အမှတ်ရစေပါတယ်၊၊ ၀မ်းနည်းအောက်မေ့ ဆုတောင်းပွဲ ကိုတက်ရောက်လာတဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေက Winnie Mandela ရဲ့ ဘ၀တလျှောက်ဆင်နွဲခဲ့တဲ့ တိုက်ပွဲရဲ့ ဆက်လက်အရေးပါပုံကို အလေးပေးပြောကြားခဲ့ ကြ ပါတယ်၊၊
ဒီအကြောင်းကို VOA သတင်းထောက် Anita Powell က Johannesburg ကနေပေးပို့ လာတာကို မမြသဇင်အောင်က တင်ပြပေးမှာပါ၊၊
တောင်အာဖရိကမှာ လူမျိုးရေးနဲ့ အသားရောင်ခွဲခြားမှုကို ဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ Winnie Mandela ဟာတောင်အာဖရိက ပြည်သူတွေလေးစား အတုယူစရာ စံနမူနာထားရသူ တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး သူကွယ်လွန်သွားပေမဲ့ သူရဲ့ ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ဆက်လက် အမှတ်ရနေကြမှာပါ၊၊ နိုင်ငံတ၀ှမ်း ဂုဏ်ပြုစကားတွေပြောဆိုခဲ့ကြတာမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Johannesburg မှာလုပ်တဲ့ ၀မ်းနည်းအောက်မေ့ ဆုတောင်းပွဲ က အကြီးကျယ်ဆုံးပါပဲ၊၊
ဘ၀တသက်တာလုံး တက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့သူ Winnie Mandela ဟာ လွှတ်တော်မှာ ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုနီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်၊၊ သူဟာ အသားရောင်ခွဲခြားမှုကို ဦးဆောင်ဆန့်ကျင် တိုက်ဖျက် ခဲ့သူ တောင်အာဖရိက ပထမဆုံး လူမည်းသမ္မတ Nelson Mandela ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ဇနီးဖြစ်ပါတယ်၊၊ သူတို့ ၂ဦးဟာ ၃၈ နှစ်ပေါင်းသင်းပြီးနောက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာကွာရှင်းခဲ့ကြပါတယ်၊၊
စနေနေ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဈာပနပွဲမှာ ချီးကျုးဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားပေးမဲ့ တောင်အာဖရိက သမ္မတ စစ်ရီလ် ရာမာဖိုဆာက Winnie ရဲ့ စွမ်းစွမ်းတမံဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဆက်လက်အမှတ်ရနေမှာ ပါလို့ Winnie Mandela ရဲ့ ကျေးလက်ဇာတိမြို့လေးမှာပြုလုပ်တဲ့ ၀မ်းနည်းအောက်မေ့ ဆုတောင်း ပွဲမှာ ကတိပြုပါတယ်၊၊
"Winnie ကွယ်လွန်တာကို ၀မ်းနည်းမိပါတယ်၊၊ Winnie ဟာ သူ့ဘ၀တသက်တာလုံး ကိုယ်ကျိုးမဖက်အများအကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ သူဖြစ်လို့ ချီးကျုးဂုဏ်ပြုထိုက်ပါတယ်၊၊"
တောင်အာဖရိက မှာ Winnie Mandela ကို တောင်အာဖရိက ရဲ့ မိခင်ကြီးလို့တင်စားကြပါတယ်၊၊ ဖြစ်ပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ်ခြင်း ခံရတဲ့ANC အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပြီး ခေါင်းဆောင် Oliver Tambo ရဲ့လက်ထောက် Kingsley Makhubela ဟာ ပြည်ပမှာထွက်ပြေးနေထိုင်ပြီး ၉နှစ်အကြာမှာ တောင်အာဖရိကကို ပြန်လည်ရောက်ရှိလာတုန်းက Winnie Mandela က အကူအညီတွေပေးခဲ့ပါတယ်လို့ ပြောပါတယ်၊၊
"Winnie က ကျွန်တော့အတွက် စံပြမိခင်တဦးပါပဲ၊၊ ပြည်နှင်ဒဏ်က လွတ်ပြီးတောင်အာဖရိကကို ပြန်လာတော့ သူ့အိမ်မှာ နေခွင့် ပေးခဲ့တယ်၊၊ ကျွန်တော့ကို မိသားစုဝင်တယောက် လိုအကာအကွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်၊၊"
တက်ကြွလှုပ်ရှားမှုတွေအတွက် Winnie Mandela ဟာ ၁၈ လ အကျဉ်းကျခံခဲ့ရဖူးတဲ့ အပြင် နယ်နှင်ဒဏ်လဲခံခဲ့ရဖူးပါတယ်၊၊ သူ့ပယောဂနဲ့ ၁၄ နှစ်သားတယောက်ကို သတ်တဲ့ အမှုကိုလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်၊၊
Winnie ကွယ်လွန်တာဟာ သူ ၁၀ နှစ်တာဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ ANC အမျိုးသမီးအဖွဲ့ကို ရှေ့ဆက်ဖို့ ပိုမိုတွန်းအားတွေရစေပါတယ်၊၊ လုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့ အသားရောင်ခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားသူ Chris Hani ရဲ့ သမီးဖြစ်သူ Lindiwe Hani ကတော့ Winnie ဟာ တောင်အာဖရိက အမျိုးသမီးထူကို စွမ်းအားတွေပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊၊
"Winnie ကြောင့် ကျွန်မ ဒီနေရာမှာ ဒီလိုအမှီအခိုကင်းကင်း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ လူမည်းအမျိုးသမီး တယောက်အဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်နေနိုင်တာပါ၊၊ သူကတော့ အကြောက်တရားကင်းမဲ့တဲ့ စွမ်းဆောင်သူပါပဲ၊၊ အများအကျိုးအတွက် ကိုယ်ကျိုးမငဲ့တဲ့သူပါ၊၊"
Winnie Mandela မသေပါဘူး၊၊ သူ့ကိုယ်ပွါးတွေအမြဲ ရှင်သန်နေမှာပါလို့ ANC အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကြေငြာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် လို့ တင်ပြသွားပါတယ်၊၊